Indlela yokuqalisa ukubuka iindwendwe
Zange kwaba lula kangaka ukufaka indlu yakho kwi-Airbnb ngendlela elungele wena. Sekusele kancinci nje ufumane imali kwaye ufikelele kwizigidi zabahambi behlabathi.
Lawula indlela owamkela ngayo iindwendwe
Yamkela iindwendwe nanini na ufuna
Akukho ubuncinci okanye ixesha elisisinyanzelo ekufuneka wamkele iindwendwe ngalo, ngoko ungazithintela iintsuku ongafumanekiyo ngayo. Unokuseta imiqathango yokufumaneka kwakho, kuquka: • Ubuncinci/ubuninzi beentsuku undwendwe olunokuzihlala • Zingabhukisha ixesha elingakanani kwangaphambili iindwendwe • Isaziso sangaphambili esifunekayo ngaphambi kokubhukisha
Beka amaxabiso oziva kamnandi ngawo
Uyazikhethela amaxabiso osuku, ibe izixhobo zethu zokubeka amaxabiso zingakunceda wenze isigqibo. Unokongeza ngokulula iinkcukacha eziqhelekileyo ezinjengezi: • Imirhumo • Izaphulelo zeveki neveki • Amaxabiso akhethekileyo ngamaxesha athile enyakeni
Funda ngokwenza imali kuAirbnb
Zilungelelanise ngokukhawuleza iikhalenda
Ukuze uthintele ukubhukishwa xa ungenakukwazi ukwamkela iindwendwe okanye unendawo enokubhukishwa, ungadibanisa ikhalenda yakho ye-Airbnb kunye nezinye iikhalenda. Oku kukuvumela ukuba ugcine zonke iikhalenda zihlaziyiwe ngokuzenzekelayo.
Beka imigaqo yendawo yakho
Ukuze uncede ziyazi into ezimele ziyilindele, usenokongeza iMithetho Yendlu ezimele zivumelane nayo iindwendwe ngaphambi kokuba zibhukishe. Ukuba undwendwe lophula umthetho emva kokubhukisha, ungakurhoxisa ukubhukisha ngaphandle kwesohlwayo.
Ukuqalisa bekulula kakhulu kunokuba bendicinga.
U-JB kunye no-Ramona babuka iindwendwe e-Boston ukuze bazenzele imali engakumbi yomhlala-phantsi.
Yenza intengiso kwizigidi
Amacebiso okukunceda uqalise
Njengoko ufaka indlu yakho, siza kukubuza imibuzo edla ngokubuzwa ziindwendwe xa zifuna ukwazi ukuba zibhukishe nini. Uza kulichaza ikhaya lakho, uchaze iinkcukacha ezinjengokuba yintoni ekhethekileyo ngalo, nazo naziphi na izinto ezimele zizilindele.
Ukuqhubeka ufumana amacebiso
Ukuba unengxaki ekubhukweni, siza kukucebisa ngamaxabiso, iisetingi, nezinye iindlela eziphuculiweyo zokukunceda uzifumane ngokukhawuleza izindlu. Kanti unokuncedwa nangababuki zindwendwe abanamava abayinxalenye yeNtsapho yethu.
Izigidi zeendwendwe zehlabathi
Wakuba nje ugqibile ukufaka indlu yakho, iindwendwe ezivela kulo lonke ihlabathi zinokuyifumana xa ziyikhangela. Zimalunga nezigidi ezi-2 iindwendwe ze-Airbnb ezibhukisha imini nganye kwaye sinezixhobo zokukunceda ufumane izindlu ozikhangelayo.
Funda ngendlela uAirbnb akunceda ngayo ukuba ufumane iindwendwe ezifanelekileyo
Fumana uncedo lokwamkela iindwendwe
Izixhobo kulo lonke
Njengombuki zindwendwe, uza kuhlala uxhaswa ngabantu bakwa-Airbnb. Ukuze ufumane amacebiso aluncedo, sineZiko Loncedo, sinababuki zindwendwe abayi-375 000 kwiNtsapho yethu, sikwanazo nezixhobo eziliqela zokubuka iindwendwe.
Iqela lethu likulungele ukukuxhasa imini nobusuku ngefowuni, i-imeyile nangokubhalelana imiyalezo. Iqela lingakunceda ngayo yonke into ukusuka ekufakeni indlu yakho ukusa kwizinto ozixhalabeleyo kwiindwendwe.
Bangaphezu kwezigidi ezi-2 abantu abamkela iindwendwe kwi-Airbnb kwaye ngamnye unendlela yakhe eyahlukileyo.
Funda ngokuba kulindeleke ntoni kubabuki zindwendwe
Kubiza malini ukufaka indlu yam?
Ukubhalisa ku-Airbnb nokufaka indlu yakho akubhatalelwa. Wakuba ubhukishiwe, sitsala imali yeenkonzo zakwa-Airbnb zababuki zindwendwe, idla ngokuba yi-3%, ukwenzela iindleko zeshishini.
Ndimele ndilikhethe njani ixabiso lendlu yam?
I-Airbnb ingandinceda njani ngokubeka amaxabiso?
Isixhobo sakwa-Airbnb esikunceda Ufikelele Kwixabiso Omawulibize silinyusa okanye silehlise ngokuzenzekelayo ixabiso kuxhomekeka ukuba zifunwa kangakanani izindlu ezifana neyakho.
Isoloko inguwe olawula amaxabiso akho, ngoko ke Indlela Ephucukileyo Yokufikelela Kwixabiso Omawulibize ilawulwa zezinye iisetingi zamaxabiso ozikhethayo, ibe ungakwazi ukuwatshintsha amaxabiso osuku nanini na.
Indlela Ephucukileyo Yokufikelela Kwixabiso Omawulibize ixhomekeke kuhlobo lwendlu nendawo ekuyo, ixesha lonyaka, ukufunwa kwayo, nezinye izinto (njengamatheko aye abekho ekuhlaleni).
Ukuba undwendwe lwaphula enye yeMithetho Yekhaya oyibekileyo okanye lwakwenza waziva ungakhuselekanga ngezenzo zalo, unokungasamkeli isicelo salo sokubhukisha okanye usirhoxise. Ngaphambi kokuba wamkele ubhukisho, Sihlola izinto ezininzi ukuze siqiniseke ukuba ufumana iindwendwe ezifanelekileyo. Ngenxa yoko, unokungasamkeli nasiphi isicelo sokubhukisha somntu ibe oko akuzoyichaphezela tu indlela evela ngayo indlu yakho xa kukhangelwa izindlu. Emva kokuba wamkele ukubhukisha Ukuba sele ukwamkele ukubhukisha, unako ukurhoxisa. Usenokufumana isohlwayo sokurhoxisa ukuba undwendwe khange lwaphule nayiphi na iMithetho Yekhaya.
Ndikhuselwa njani ekonakalisweni kwendawo yam?
I-Airbnb inesixa-mali se-$1 000 000 Esisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo ekulungeleyo ukuyihlawula ukuba kuye kwenzeka undwendwe lonakalisa indawo yakho ngomonakalo ongaphezu kwedipozithi oluyikhuphileyo, okanye ukuba khange luyikhuphe idipozithi.
Le mali Esisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo ayiyihlawuleli imali eziinkozo, izinto zexabiso eziqokelelweyo, imizobo enqabileyo, ijuwelari, izilwanyana zasekhaya okanye amatyala akho. Sicebisa ukuba ababuki zindwendwe bazikhusele okanye bazisuse izinto zabo zexabiso xa berentisa ngendlu yabo. Kwakhona le mali ayiwuhlawuleli umonakalo oqhelekileyo wendlu.
Funda okungakumbi ngeSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo kule webhsayithi http://airbnb.com/guarantee
Ukulungele ukwenza imali?